Mmelite: Akụkọ ụgbọ elu United Airlines na-akọghị akụkọ banyere COVID-19 Nightmare na-aga n'ihu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Mmelite: Akụkọ ụgbọ elu United Airlines na-akọghị akụkọ banyere COVID-19 Nightmare na-aga n'ihu
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị njem 50 gbagoro n'ụgbọ elu United Airlines 3742 si Chicago gaa Milwaukee, nke Air Wisconsin na-arụ, na Mọnde ga-enwe obi abụọ ma ọ bụrụ na ha butere COVID-19. Agaghị ekwe ka ụgbọ elu a pụọ, onye na -ahụ maka ụgbọ elu na onye isi ụgbọ mmiri gosipụtara na nke a adịghị mma.
Ndị FAA nyere aka eTurboNews ma kweta okwu ahụ.
Ndị FAA kwuru eTurboNews ma Sistemụ ikuku oyi mebiri na ọ bụ ihe a na -adịghị ahụkebe maka ụgbọ elu ahụ iji ndị njem efegharị, mana ọ bụghị iwu na -akwadoghị
Kwuo eTurboNews na enwere ike achọpụtala loopole n'ihi akụkọ a. Kedu ihe dị mma n'oge ọrịa na -adịghị, nwere ike ọ gaghị adị mma n'oge ọrịa. Nwelite ọzọ ga -abịa
Ụgbọ elu United Airlines na -ebugharị ụgbọ elu ebe agbanyụrụ filtration ikuku n'ihi adịghị arụ ọrụ.
Amaara okwu a tupu ọpụpụ ma leghara ya anya.
United Airlines UA 3742 si Chicago gaa Milwaukee n'October 4.
Scott Kirby, Onye isi ụlọ ọrụ United Airlines, kwuru na July 2020: “Anyị maara na gburugburu ụgbọ elu adịghị mma, n'ihi na emebere ikuku ikuku iji belata mbufe ọrịa, yabụ na mbụ anyị na -ebuli ikuku elu karịa na usoro nzacha HEPA anyị, ọ ka mma maka ndị ọrụ ụgbọ mmiri anyị na ndị ahịa anyị. Ogo ikuku, yana amụma mkpuchi ihu siri ike yana ebe a na-ehichakarị, bụ ihe mgbochi iji gbochie mgbasa COVID-19 n'ụgbọ elu. ”
Ọ na -ewute ịhụ na otu ụgbọ elu ahụ leghaara ihe onye isi ya toro dị ka naanị ụzọ isi rụọ ụgbọ elu n'enweghị nsogbu n'oge ọrịa.
Nlekọta United Airlines na Chicago gbara onye isi ụgbọ elu na -efegharị UA 3742 ka ọ pụọ ebe ọ maara na enweghị ike iji sistemụ nzacha ikuku na obere ụgbọ elu a na -aga Milwaukee. Ihe ngọpụ: mmezi nke Air Wisconsin dị na Milwaukee - echefula ndị njem.
UA 3742 bụ ụgbọ elu ụgbọ elu nke dabeere na Milwaukee Air Wisconsin, na-eji CL 65, nke yiri ụgbọ elu CRJ 200. Canadair CL 65 bụ ụgbọ elu oche 50 nke Quebec, Bombardier nke Canada, wuru n'etiti 1992 na 2006.
Mgbe ole eTurboNews a na -akpọ nkwado teknụzụ Bombardier, a gwara akwụkwọ a na ụgbọ elu emeela agadi iji nwee nkwado ịntanetị ugbu a.
ekele Ihe nzacha ikuku ikuku ikuku na-arụ ọrụ nke ọma n'ụlọ ọgwụ, imirikiti ụmụ irighiri ihe (gụnyere nje na ụmụ irighiri mmiri na -efe efe) ka a na -ewepụ n'ikuku ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ n'oge ọ bụla ka a na -agba ya ma were ikuku ikuku dochie ya. Nke a na-ewere ọnọdụ n'ụgbọ elu niile buru ibu karịa ọdụ ụgbọ elu mpaghara nwere oche 50 ọ bụ ezie na ụfọdụ ụgbọ elu na-etinye ego na teknụzụ nzacha HEPA n'ụgbọ elu ndị ahụ ugbu a.
Kedu ihe doro anya, ọ bụrụ na enweghị ikuku ikuku na-eme na ụgbọ elu ndị njem, nke a ga-etinye ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri n'ihe ize ndụ ijide nje, dị ka COVID-19. eTurboNews kpọtụụrụ onye ọka iwu ụgbọ elu Lee na New York, yana VJ P, onye bụbu onye isi oche Etihad Airways iji kwado nke a.
A na-atụ aro ka ị nọrọ 6 ụkwụ site na onye njem na-esote, nke ga-agaghị ekwe omume na ụgbọ elu azụmahịa ọ bụla, ọkachasị n'ụgbọ elu nwere akwụkwọ zuru oke, dịka UA 3742 na Ọktọba 4.
Enweghị ndọpụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nzacha ikuku kwesịrị ekwesị nwere ike bụrụ naanị ihe nwere ike ịdị n'etiti onye njem na nje.
Na UA 3742 na -arụ ọrụ site na Chicago O'Hare ruo Milwaukee na Ọktoba 4, ndị ọrụ ala United Airlines kwupụtara na mpaghara ịbanye, na ọ nwere ike nweta ntakịrị ọfụma n'ụgbọ elu ebe ọ bụ na ntụ oyi adịghị edozi. Enweghị nkọwa ọ bụla na sistemụ ikuku ahụ apụla, yana ọ ga -etinye ma ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ịnabata coronavirus ma ọ bụ ọrịa ikuku ọ bụla ọzọ.
UA 3742 tagzi n'okporo ụzọ awara awara na Chicago, na ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime ya adịla ọkụ nke ukwuu, na ọtụtụ ndị njem malitere ịsụsọ, ụfọdụ ndị ọzọ wee malite ụkwara.
Usoro mgbasa ikuku abatabeghị, mana ọ bụ ihe ijuanya na onye na -ahụ maka ụgbọ elu ahụ ji nganga kọwaa usoro nhicha United Airlines ọhụrụ.
Mgbe a jụrụ ya na nzuzo, otu onye na -eje ozi ụgbọ elu ahụ gwara ya eTurboNews na ọ na -atụ ụjọ ịnọ n'ụgbọ elu ahụ ma ekwere ya nkwa na ụgbọ elu gara aga, a ga -emeso usoro ikuku ahụ na Chicago. O kwuru na ọ kwetara na ọ kwetara ịga n'ihu na Milwaukee, nke bụkwa ebe obibi ya, na -agbakwụnye na ọ gaghị alaghachi ọrụ ka ọ fepụ n'ụgbọelu a ọzọ.
eTurboNews na -agakwuru United Airlines na Air Wisconsin ugboro ugboro iji nweta nkọwa ma ejiri ihe nzacha dị otú a na ụgbọ elu a. Enweghị azịza ọ bụla site na nke ọ bụla.
O doro anya na Chicago, ọdụ ụgbọ elu UA, mmezi ụgbọ elu United Airlines achọghị idozi okwu a wee tụọ aro maka ụgbọ elu ahụ gaa Milwaukee ka ọ rụọ ọrụ, yabụ enwere ike idozi ụgbọ elu ahụ na Milwaukee, isi ụlọ nke Air Wisconsin.
eTurboNews soro onye na-anya ụgbọelu kwurịtara okwu ma rute ma jụọ ma ọ dị mma iji ụgbọ elu edere nke ọma yana sistemụ ikuku na-adịghị arụ ọrụ n'oge ọrịa. Onye na -anya ụgbọelu kwetara eTurboNews ọ bụghị, ọ rịọ mgbaghara.
Onye njem ọzọ kwuru na ọ bụ onye isi ezumike nka lara ezumike nka na iwe were ya na onye isi ụgbọ elu Air Wisconsin rụrụ ụgbọ elu a.
eTurboNews ruru United Airlines ọtụtụ ugboro iji chọpụta ma enwere ike ịchọpụta ndị njem nọ n'ụgbọ elu a, mana ọzaghị ihe ọ bụla.
eTurboNews rutekwara United Airlines na -arịọ maka nkọwa. Mmekọrịta mgbasa ozi gwara eTurboNews, onweghị ihe mere wee banye maka ụgbọ elu a.
Ndị ọrụ ndị ahịa UA kwuru na, nke a abụghị nnukwu ihe ebe ọ bụ na ọ bụ ụgbọ elu dị mkpụmkpụ, mana ha ga -eto puku kilomita na -efe efe ugboro ugboro maka "mgbakasị ahụ".
Otu nwa amadi nke aha ya bu "Chris" kparita uka eTurboNews onye nkwusa Juergen Steinmetz. O kwuru, na ọ bụ VP nke nchekwa ụlọ ọrụ maka Air Wisconsin. Ọ nabatara ihe merenụ ma rịọ mgbaghara. O kwere nkwa ịlaghachi na eTN na nkọwa ndị ọzọ. Ọ meghị, mana kama Air Wisconsin zitere email na -enweghị aha kọntaktị ma ọ bụ mbinye aka.
Banyere ahụmịhe gị na nso nso a na ụgbọ elu 3742 yana ọrụ si Chicago ruo Milwaukee. Nchekwa bụ ihe kacha anyị mkpa na Air Wisconsin.
Ụgbọ elu ahụ zutere ụkpụrụ ikuku ikuku FAA na ndị ọrụ anyị, na ndị ọkachamara na -ahụ maka nrụzi ha, gbara mbọ hụ na ụgbọ elu ahụ adịghị mma ịrụ ọrụ. Anyị na -arịọ mgbaghara maka mmekpa ahụ ọ bụla ị nwetara n'ụgbọ elu gị ma kelee gị maka itinye anyị n'okwu a.
Juergen Steinmetz kwuru ekwu, sị:
October 10, 2021 na 03: 27
Naanị ịkọwa okwu gị.
Ọrụ ndị ahịa United Airlines 1K gwara m na oku na -esochi nke abụọ na ha kwụghachiri m kilomita 5K. Azara m na abụghị m akwụ ụgwọ kama ọ bụ nkọwa ma chọọ ịhụ ya UA na -esochi ndị njem nọ n'ụgbọ.
Nwanyị ahụ sitere na onye ahịa 1 K na oku a edekọtara kwuru na nke a bụ naanị ụgbọ elu dị mkpụmkpụ na enweghị ike ịkwụghachi ụgwọ ọzọ na -eleghara nchegbu m anya.
Ajụrụ m ndị mmekọrịta mgbasa ozi maka nzaghachi. Mgbe emelitere ozi ịntanetị 5, naanị nzaghachi enwetara bụ nke ebipụtara yana site na ikuku Wisconsin.
Agwara m Chris VP nke nchekwa site na
Air Wisconsin onye maara okwu a ma kwe nkwa ịlaghachikwute m - ọ meghị.
L. Lazuli ekwu, sị:
October 10, 2021 na 01: 49
Ọ dị ebe a nke ukwuu ịkpọ BS. A. Ọ bụghị ụgbọ elu United ma ọ bụ ndị ọrụ ụgbọ mmiri, ọ bụ ụgbọ elu na -ebugharị. B. Ọ bụrụ na ndozi adọla onye isi ụgbọ mmiri aka na ntị gịnị kpatara na enweghị akụkọ edere na sistemụ mebiri emebi? C. Enwere m obi abụọ nke ukwuu na onye ọ bụla na njikwa United ga -agwa ndị nta akụkọ okwu na -asị na nke a abụghị "nnukwu nsogbu" ebe ọ bụ ụgbọ elu dị mkpirikpi. Akụkọ ọ bụla nwere akụkụ abụọ na nke a juputara na oghere.